Miss World 2000: 117 ရက်ပေါင်းနှင့်ကွာရှင်း ensues !!! - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » ပုံမှန်မဟုတ်သော • လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "Miss World 2000: 117 ရက်ပေါင်းနှင့်ကွာရှင်း ensues !!!
Miss World 2000: 117 ရက်ပေါင်းနှင့်ကွာရှင်း ensues !!!
Eliséoမင်းသမီး Emma Kamgang 10 ခုနှစ်ဧပြီလ 2019
ရေ Priyanka Chopra ကများနှင့်နစ်ခ် Jonas အကြားဓာတ်ငွေ့ရှိလိမ့်မည်နည်း အမေရိကန်သတင်းစာအဆိုအရကြင်စဦးဇနီးမောင်နှံရုံငါးလသူတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောက်ပြီးသားကွာရှင်းစဉ်းစားပါလိမ့်မယ် ...
ပြီးခဲ့သည့်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းက, Priyanka Chopra ကများနှင့်နစ်ခ်ယောနငါတို့သည်တဖန်ယခုနှစ် THE မင်္ဂလာဆောင်စည်းရုံးရေးအားဖြင့်နတ်သမီးပုံပြင်ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ သာလအနည်းငယ်ကသူတို့အချစ်ဇာတ်လမ်း၏အစအပြီးလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းငှါအလိုရှိသောအိန္ဒိယဗုံး 36 နှစ်ပေါင်း 2000 အတွက်အလှမယ်ကမ္ဘာ့ဖလားနှင့်ကျော်ကြားသောအမေရိကန်အဆိုတော် 26 နှစ်ပေါင်းစုစည်းဖို့ချီတုံချတုံမပြုခဲ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရ တစ်လကျော်ပြန့်နှံ့မနည်းသုံးခြင်းထက်ကွဲပြားခြားနားသောအခမ်းအနားများနှင့်အတူအံ့မခန်းမင်္ဂလာဆောင်.
ထိုသူတို့၏ထိမ်းမြားလက်ထပ်ကတည်းကနှစ်ခုလူငယ်များလူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်မတ်ေတာ၏ဆန္ဒပြပွဲများများပြားနေဆဲဖြစ်သည်။ သူမ၏နှစ်ခု stepsisters, ဒန်ယဲလ်နှင့်ဆိုဖီကဲ့သို့ပင်လှပ Priyanka သူတို့ရဲ့အကြီးအဂီတတစ်ကျော့ပြန်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသူ Jonas Brothers ၏နောက်ဆုံးကလစ်ထဲမှာပေါ်လာပါသည်။
သို့သျောလညျးထိုအပြီးပြည့်စုံသောပွဲရှိနေသော်လည်းအမေရိကန်သတင်းစာ OK ကို! မဂ္ဂဇင်း ကွာရှင်းငယ်ရွယ်စုံတွဲကြေညာထားတဲ့ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခဲ့သည်။ Priyanka နှင့်နစ်ခ်, ကြီးမားတဲ့မီဒီယာ၏ခေါင်းစဉ်၏ရုပ်ပုံတွင် 117 ရက်အကြာမှာ "ကွာရှင်း! "အောက်ပါအချက်အလက်များကိုခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်: "မုသာ, အငြင်းပွားမှုများနှင့်သစ္စာဖောက် ... သူ့မိသားစုကသူမကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြားကိုအဆုံးသတ်ဖို့သူ့ကိုတောင်းပန်ဘယ်ကြောင့်2သန်းမင်္ဂလာဆောင်အတွက်လဟဿ ... "
"ဟုသူမက 21 နှစ်ပေါင်းခဲ့လျှင်အဖြစ်သူမသည်ပြုမူ"
တူညီသောမဂ္ဂဇင်းအဆိုအရ, Nick Jonas အလျင်အမြန်သူ့ဇနီး၏စစ်မှန်တဲ့မျက်နှာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဖြင့်စိတ်ပျက်မယ်လို့: " နစ်ခ်ကိုသူတို့လက်ထပ်ပေမယ့်သူ့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အားမိမိအလိုဆန္ဒကိုတွေ့သည့်အခါ Priyanka အသက်ရှင်ရန်လွယ်ကူသောခဲ့ကြောင်းယူဆခဲ့ကြသည်။ ဒါ့အပြင်သူမ "နစ်ခ်မင်္ဂလာဆောင်မတိုင်မီသတိပြုမိဘူးသောအရာတစ်ခုခုသည်မိမိအမျက်ထွက်ခြမ်းထုတ်ဖော်ပြသထားပါတယ်.
မဂ္ဂဇင်းကိုလည်းသူတို့တစ်တွေလက်ထပ်ထိမ်းမြားစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးမပေးခဲ့ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုရန်နှင့်ကွာရှင်း၏အမှု၌ထောက်ပြလျှင်, မင်းသမီးအဆိုတော်များ၏ကံကြမ္မာ၏ထက်ဝက်ကိုအမွေခံရနိုင်တယ်လို့သူလည်းပွဲရှိနေသော်လည်းကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသသည်, မိမိ ယောက္ခမမကြိုက်ဘူး: "သူတို့က Priyanka ရငျ့ကကျြမိန်းမတယောက်သည်သူမမိသားစုကိုစတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပေမယ့်အဲဒါကို 21 နှစ်ပေါင်းခဲ့လျှင်အဖြစ်ပြုမူသူတစ်ပါတီမိန်းကလေးကြောင်းကိုသူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီထင်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့အသစ်တခုဆိုးဟာသ၏ဆိုဖီ Davant gross ရှက်စရာ sequence ကို!
ဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်နှုတ်ဆက်: Shan'L Abidjan က "Tchizambengue" ဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်